Xukuumadda Somaliland Oo Shaacisay In Ay Waddo Qorshe Ay Imaaraadka Kaga Kiraynayso Saldhig Milatari Magaalada Berbera – Tusmoonline.com
Xukuumadda Somaliland Oo Shaacisay In Ay Waddo Qorshe Ay Imaaraadka Kaga Kiraynayso Saldhig Milatari Magaalada Berbera
Wararka	December 22, 2016	89	Like
“Ma Aha Wax Qarsoon Wax La Qarinayona Ma Aha, Madaxweynuhu Wuu Ka Aqbalay Codsigooda Waxaana La Marin Doonaa Nidaamka Dalka”….W/Farxaan
Hargeysa (TUS) Wasiirka Wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland Md. Farxaan Aadan Haybe ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland waddo in muddo ahna ku hawlanayd qorshe ay saldhig Milatari ku siinayso dawladda Imaaraadka Carabta gaar ahaan Imaaradda Abu Dhabi iyada oo u maraysa shuruucda waddanka u taalla balse aanay jirin sida uu hadalka u dhigay wali heshiis ay xukuumaddu Imaaraadka la gashay sida ay warbaahintu qortay.
Wasiirka wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland Mudane Farxaan Aadan Haybe oo shalay warbaahinta kula hadley xafiiskiisa waxa uu sheegay in uu jiro in laga wada hadley codsi uu imaaraadku madaxweynaha Soo hor dhigay oo ah in Berbera Saldhiga Milatari laga siiyo balse waxaa u meesha ka saaray in aanu jirin wax heshiis rasmi ah oo arintaasi laga gaadhey.
“Waxa ay xignayaan waa waftigii aan ka mid ahaa oo Madaxweynuhu hogaaminayay oo aanu safar ku tagnay waddanka Isu Tagga Imaaraadka Carabta ee aan markii aan imid halkan shirka jaraa’id ku qabtay. Waanigii maalintaasi sheegay wixii aannu kasoo wada hadalnay oo ahaa is faham buuxa oo aannu ka yeelanay in Saldhig Milatari dawladda Somaliland imaaraadka Carabta siiso Madaxweynuhuna ka aqbalay codsigoodii ay arrinkaa ku soo jeediyeen. Wax qarsoonna may ahayn wax la qariyeyna ma aha, wax aannu qarinaynona ma aha. Laakiin waxa khalad ah oo aan u arkaa in ay tahay arrin aan jirin heshiisbaa la galay, heshiisbaa la galay in la yidhaahdo waa wax aan jirin”
“Codsigaasi Imaaraadka waxa uu Madaxweynuhu kaga jawaabay mar kale ayaan ku celinayaa oo Dawladda Imaaraadka Carabtu khaasatan Imaaradda Abu Dhabi waxa ay Madaxweynaha Somaliland u soo jeedisay oo ay yidhaahdeen waxa aannu doonaynaa in aad saldhig Milatari naga siisaan Magaalada Berbera. Madaxweynuhu wuu ka aqbalay waxaase uu u soo jeediyey oo uu ku yidhi qaran jira ayaannu nahay nidaamkiisa leh dawladdiisa leh, qaab dhismeedkiisa golayaal leh, sharci-dejintii leh waxna ka madaxweyne ahaan awood dhammays tiran baan u leeyahay waxna waxa ay ku xidhan yihiin shuruucdii iyo in Golayaashii sharci dejinta la hor geeyo oo la mariyo wasiiladdii golayaasha qaranka. Markaa Madaxweynuhu waxa uu ku yidhi waannu idinka aqbalnee aannu isku noqono oo aannu xeerkayaga soo eegno sidoo kalena aan Golaha Baarlamaanka hor gayno in ogolaanshiyo naloo siiyo in aannu wada xaajood ka gali karayno saldhig Milatari in la bixiyo. Taasina odoroskeedii iyo naaqishaadeediina Illaa hadda waan ku jirnaa. Wixii hadhaw heshiis laga gaadhi marka ay gaadh wakhtigeeda qarankeena ayaa u aayaya shaqo abuur baa laga helayaa, damaanad wanaagsan bay innoo noqonaysaa maadaama aynaan wali qaran la aqoonsan yahay ahayn. Sidoo kale waxa aanu eegnay oo aannu dib mar kale u qiimayn doonaa khataraha ka iman kara maadaama aanu mar walba qaranka lexejeclo ka leenahay” ayuu yidhi wasiir Farxaan aadan Haybe .